Lasa ny Raiamandreniben’ny diosezin’i Morombe - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Ny 11 Septambra 1930 izy no teraka tao Balsthal tany Suisse. Tany aminâ€™ny tanindrazany avokoa sy tao aminâ€™ny fikambananâ€™ny Misioneranâ€™ny Fianakaviana Masina no anaovany ny fianarana sy ny fiofanana maha pretra rehetra. Taorianâ€™ny â€œnoviciatâ€� dia nanolotra ny tenany manontolo ho anâ€™ny fikambanana sy ny Fiangonana ka nanao ny voady voalohany taminâ€™ny 21 Novambra 1952 tany Suisse.
Nitohy hatrany ny fiofanana nataony ka ny 29 Jiona 1957 izy no nohasinina ho pretra tany Suisse ihany. Faniriany ny hanaomisionera ary nofidiny I Madagasikara. Noho izany, tonga teto Madagasikarany mompera Hafner Alwin Albert MSF ny 7 Septambra 1959.
Arakâ€™izay, ny 6 volana voalohany dia nianatra ny fiteny Malagasy tao Ambositra izy. Taorianâ€™izay dia tsy niasa afa-tsy tao aminâ€™ny Diosezinâ€™i Morombe. Eny, tao aminâ€™ny Diosezy Morombe no nanatanterahany ny asa fitoriana ary ny andraikitra marosamihafa no niandreketany. Ny 10 taona voalohany â€œvicaireâ€� tao Ankazoabo Atsimoizy (Jiona 1960- Desambra 1970). Taorinâ€™izany, notendrenâ€™ny eveka ho mpiandraikitra sy ho mpampiofanana ny katekista eranâ€™ny Diosezy. Naharitra 16 taona (Janoary 1971- Desambra 1987) izany asa izany. Nanaraka izany,voatendry hitondra ny distrikanâ€™Angarazy (Tanandava Station) izy nandritra ny 11 volana (Janoary 1988-Novambra 1988).
Maty mantsy i Mgr Joseph Zimmermann MSF ny 4 Desambra 1988, izay eveka voalohany nitondra ny Diosezinâ€™i Morombe, ary dia i mompera Hafner Alwin Albert MSF no voafidy ho â€œAdministrateur DiocÃ©sainâ€�. Hitantana ny Diosezy vonjy maika mandra-pahitana ny eveka vaovao. Izy ihany no votendry ho evekanâ€™ny Diosezinâ€™i Morombe taminâ€™ny 12 Novambra 1989.
Nohasinina ho Eveka teto Morombe izy taminâ€™ny 22 Aprily 1990. Ny teny filamatra nofidiny dia ny hoe â€œAo aminâ€™ny Lakroa no fiavotanaâ€�.Azo lazaina fa ny asany, ny fianany manontolo dia tahaka ny Lakroa izay nantenainy sy ninoany. Ny Lakroa nentinâ€™I Jesoa Kristy tokoa no hanavotra sy hanamaivana ny fisalasalana sy ny ahiahy rehetra.Ary ny fanekena Azy dia manavotra, araka ny hira noforononâ€™Itompokolahy Mompera RAJOMA Vincent MSF, izay mifototra aminâ€™izany teny filamatra izany hoe:
1- Ny voambary nafafy
Tsy mitsiry raha tsy lo,
Ny voaloboka ratsanana
Raha tiana hamoa kokoa.
Fv: Tsy mitory ve izany
Fa ao aminâ€™ny Lakroa
2- Nony tonga eto an-tany
I Jesoa tmpo
Tsy tonga ho tompoina
Fa mba hanompo
3- Fahadalana sy faharesena
Hoanâ€™ny hafa ny Lakroa
Hoanâ€™ny mpino manan-tsaina
Rehareha ny Lakroa.
Nandritra ny10 taona no nahafahany nanatanteraka ny raharaha maha eveka izany. Noho izy tsy salama dia nametraka fialana talohanâ€™ny tokony hisotroany ronono (emerite). Taminâ€™ny 25 May 2000, nankatovinâ€™i Roma izany fangatahany izany.
Noho ny antony voalaza etsy ambony io, dia niverina any an-tanindrazany any Suisse sy taminâ€™ny fikambanany (Misioneranâ€™ny Fianakaviana Masina) i Mgr Hafner Alwin Albert MSF, taminâ€™ny Septambra 2000, mba honina sy hitsabo tena.
Naharitra ela tokoa ny nanompoany ny Fiangonana teto Madagasikara ary indrindra ny Diosezinâ€™i Morombe satria naharitra 41 taona izany fanompoana izany.
Fa ny nahatsiarovanâ€™ny maro azy dia izy tia mampianatra ny fomba tokony hajaina sy arahina mandritra ny fankalazana, mbola eo ihany koa ireo sora-tanany hita aminâ€™ny boky maro, izay manoro ny tokony hatao. Rahefa mandalo sy mitsidika ny disitrika izy dia tena sarotiny ary manao teny mivantambatana, na dia izany aza dia mora manambitamby sy mamindra fo. Izany no iantsoanâ€™ny maro azy hoe â€œMasiaka be rononoâ€�.
Ny Eveka amperinâ€™asa, ny pretra rehetra, ny relijiozy sy ny kristianina manontolo dia mankasitraka sy mivavaka ho Anao Monsenera.
Eny Monsenera Ray Malala, mandria am-piadanana ary mivavaha ho anay.
P Calliste Morombe